Ukuphanga okwesibini kwivenkile yeApple, uCorte Madera. Eli xesha lixabisa i $ 24.000 | Ndisuka mac
Ukuphanga okwesibini kwivenkile yeApple, uCorte Madera. Eli xesha li- $ 24.000
Ubusela kwiivenkile zakwa-Apple zihlala zingumyalelo wosuku kwaye ngaphezulu kuthathelwa ingqalelo ixabiso leemveliso zayo kunye nokuthembela okuboniswa yinkampani kubathengi bayo, ebavumela ukuba babe nazo zonke izixhobo ezandleni zabo kungabikho manyathelo okhuseleko. Kulungile, oonogada babucala abanazo iivenkile okanye ikhebula le-alam abaligcinayo kuninzi lwabo banqanda "abahlobo babanye" kancinci, kodwa u-Apple usazimisele ukunika izibonelelo ezininzi kula masela kwaye kwithuba elidlulileyo yintoni ezinye iivenkile eziqinileyo zisuse iintambo zokhuseleko kwizixhobo ezibonakalisiweyo, i-iPhone, iMac, i-iPad, njl., njl.
Njengakwimeko yale venkile ikhoyo eCarlifonia kwaye kwiinyanga ezimbalwa sele iphangiwe kwada kwakabini, kule venkile izixhobo azinayo intambo yokhuseleko. Le yenye yeetweets apho ungabona khona iitafile ezingenanto zezixhobo ezithe zathathwa leli qela labantu abatsha abahlanu abaza kuphanga iVenkile yeCorte Madera eCalifornia:
Jonga ikhawuntari engenanto kwiVenkile yeApple yeCorte Madera. Amapolisa athi amasela ama-5 abambe malunga neemveliso ezingama- $ 24k kwaye bahamba phezolo pic.twitter.com/FSrkYSH32q
-Amy Hollyfield (@amyhollyfield) 25 April 2017
Impango ayisiyoyona inkulu esiyibonileyo kuphango lwevenkile yeApple, kodwa ezo $ 24.000 bazenzileyo abantu abatsha abahlanu abathathe ii-iPhones ezili-17, ii-iPads ezi-3 kunye nee-2 iiMac, Ungawutshintsha umgaqo-nkqubo ka-Apple kule venkile. Kwixesha elidlulileyo, ukuphanga kwakukhulu ngandlela ithile kodwa iseyimpazamo kwinkampani ekufuneka ithathele ingqalelo ukuba izishiye izixhobo zisimahla kuye wonke umntu okanye ivumele nje ukukhululwa kwazo nomsebenzi wevenkile ecaleni komsebenzisi- kwisitayile esicocekileyo seApple -ukuthintela olu hlobo lobusela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuphanga okwesibini kwivenkile yeApple, uCorte Madera. Eli xesha li- $ 24.000